Indawo yokuhlala yaseFama yale mihla ingqongwe yiFama
Ithe cwaka eJarrettsville kwaye ingqongwe yifama yindawo yokuphumla yasefama yanamhlanje ephakamisa amava e-Airbnb kundwendwe ngalunye. I-Jarrettsville ilungile kwindawo emnandi ngaphakathi kwemizuzu engama-30 ukuya kwizixeko ezikhulu kwingingqi ye-Greater Baltimore kunye ne-Southern PA kwaye ikufuphi ne-plethora yeendawo zokuthengisa utywala zasekhaya kunye neendawo zewayini kunye neevenkile zasekhaya, iivenkile zokutyela, imisitho, kunye nemisebenzi yangaphandle ebandakanya ukuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba. kunye netyhubhu. Isidlo sakusasa, ibhafu yokuntywila, kunye nemililo yenkampu zonke zibandakanyiwe!
Iphefumlelwe nguMagnolia eWaco, TX, indawo eqaqambileyo nevulekileyo ivakala inomoya kwaye ipholile ngexesha elinye. Uninzi loyilo lwendlu yasefama yanamhlanje kunye nokuhombisa kunye nokuchukumisa okucingisisiweyo kulo lonke ukunika iindwendwe amava awodwa kwaye angenakulibaleka.
Iibhedi ezimbini zokumkanikazi ezitofotofo kakhulu kunye nesofa ziyafumaneka zokulala kubandakanya ipakethe kunye nokudlala xa kuceliwe. Ikhabhathi kunye nesinxibo zibandakanyiwe kwindawo yokugcina ukuba kuyimfuneko. Impahla ekwabelwana ngayo iyafumaneka xa iceliwe.
Yonwabela i-R&R encinci kwigumbi lokuhlambela elinezinto ezininzi kubandakanya nebhafu yokufunxa ngeebhombu zokuhlambela, iityuwa kunye namaqamza kunye neemaski zobuso obumnandi onokukhetha kuzo ukuze ulungele ukuphumla.
Ikhitshi ligcwele isikhenkcisi esincinci esibandakanya isikhenkcisi esizinikeleyo, umenzi wekofu waseKeurig oneekomityi ze-K kunye neti, i-oveni yetoaster kunye nehotplate kunye nazo zonke iziseko zekhitshi ozifunayo! Yonwabela isidlo sakusasa esikhawulezayo nesinencasa phambi kokuba uphume ngeeyoghurts ozikhethileyo, iimuffins kunye neebar zegranola. Nceda uqaphele: izinto zesidlo sakusasa zibandakanyiwe kuphela ukuhlala ngokukhawuleza ukuya kwiintsuku ze-2 kuba iikhefi zasekhaya zikude kakhulu. Zive ukhululekile ukuthenga kufutshane ukuze uhlale ixesha elide!
Hlala ecaleni kwefestile enkulu yemifanekiso ejonge kwifama okanye uphumle esofeni kwaye ubukele i-tv encinci. I-Wifi iyafumaneka ngokufikelela kwiNetflix, kwiNkulumbuso kunye neDisney + kunye nekhompyutheni yekhompyuter ukuba ufuna ukwenza umsebenzi othile.
Ngaphandle kukho i-oasis encinci yangasese enetafile yepikiniki kunye neendawo zokuhlala ezinomhadi womlilo. Indawo yokupaka iyafumaneka kwindawo yokupaka yabucala yakwa-Airbnb.
Amatye anqabileyo amaninzi asekuhlaleni ukufumana amava kwidolophu yethu encinci. Jonga iJarrettsville Deli kunye neCreamery enemenyu enkulu yesidlo sasemini kunye neyona ice cream ibalaseleyo! I-Madonna Seafood yeyona ndawo idumileyo kwisidlo sangokuhlwa kubandakanya ipizza, oononkala kunye nokunye. Ngaba ufuna iziseko ezithile? IDola Jikelele ikumgama oziikhilomitha ezimbalwa.
Uyakufumana abantu balapha behamba behamba ngebhayisekile kwisitrato sethu ngoko uzive ukhululekile ukwenza okufanayo. Ukuba ujonge i-adventure encinci, ukuloba, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile kunye nokukhwela i-tubhing kwindlela ye-NCR yimizuzu nje eli-15 kude.
Uninzi lwabakhenkethi beza kwizinto ezimangalisayo ezifunyenweyo zalapha ekhaya, ukuhonjiswa kwekhaya kunye nobugcisa obenziwe ngamagcisa alapha ekhaya ngelixa bethenga eSouthern Sol Shoppe nase Belle Patri kunye neGreen Door kunye nePainted Mill.
I-Jarrettsville isembindini wentaphane yeendawo eziqalwa kakhulu zotywala zasekhaya kunye neendawo zewayini. Ngcamla ibhiya kwaye wonwabele umculo wasekhaya ophilayo e-Iverness, Falling Branch, Double Groove, Slate Farm, Independent, AleCraft, Big Truck, B.C., South County kunye neGunpowder Falls. Jonga incasa yewayini yendawo kunye neziganeko eBoordy, DeJon, Harford, Fiore, Royal Rabbit kunye neBasignani Wineries.
Sihlala kwipropathi ukuze sifumaneke nanini na usifuna okanye inokuba ngumbhalo nje kude. Singabantu abanobubele kodwa sibuxabisa ubumfihlo ngokufanayo ukuze uzive ukhululekile ukuseta ithoni malunga nokuba uziva ukhululekile kangakanani ngexesha lokuhlala kwakho :)
Sihlala kwipropathi ukuze sifumaneke nanini na usifuna okanye inokuba ngumbhalo nje kude. Singabantu abanobubele kodwa sibuxabisa ubumfihlo ngokufanayo ukuze uzive ukhululekile uku…